Akụkọ - Ihe atọ na -anya ụgbọ ala maka imepụta ika nke rọba plastik
Ọnụ ego LVT
Ọnụ ala WPC
Ihe atọ na -anya ụgbọ ala maka imepụta ika nke ala rọba plastik
Mmepe nke ụlọ ọrụ plastik plastik nke dị na China amalitela iji nke nta nke nta tozuo oke, ụzọ ụlọ ọrụ omenala nke ụfọdụ obere ụlọ ọrụ na-eme ala nwere ike na-agakwa n'ike n'ike. Nrụpụta njikwa ika, ọwa ahịa na ụdị, na nka nka ụlọ ọrụ bụ akụ na ụba anyị n'ọdịnihu. Ngwá agha dị mma na mmepe na ọganihu. Dị ka anyị niile maara, a na -ekewa ala ụlọ PVC na akwa na akwa. Nkume plastik na -ezo aka na mpempe akwụkwọ. Site na ihe owuwu ahụ, a na-ekekarị ya na mpempe akwụkwọ jikọtara ọnụ, mpempe akwụkwọ mejupụtara ọtụtụ ihe, na mpempe akwụkwọ isi ọkara; site n'ụdị ya, a na -ekewa ya n'ime ihe akụkụ anọ na ihe warara. Ngwongwo ala ụlọ plastik na-eji pvc plastik dị ka ihe bụ isi iji jiri nwayọọ nwayọọ nweta ihu ọma nke ndị na-azụ ahịa, nke a bụ plastik plastik. A na -akpọkwa plastik okwute okwute. Aha aha kwesịrị ịbụ "ala mpempe akwụkwọ PVC". Ọ bụ ụdị ihe eji achọ ụlọ dị ọhụrụ nke nyocha na mmepe teknụzụ dị elu mepụtara. Ọ na-eji ntụ ọka marble eke na-eme akwa taịlị dị elu na njupụta. Ala siri ike nke ntọala netwọkụ eriri, kpuchie elu ya na akwa na-eguzogide polymer PVC na-eguzogide, nke a na-ahazi ya site na narị narị usoro. Ihe atọ a bụ ihe dị mkpa maka mmepe mmekọrịta ọha na eze nke ụlọ ọrụ na -ete ala, ọkachasị maka ụlọ nrụpụta ụlọ nke dị n'oge a na -ewu ihe onyonyo.
Onye na -enye ala na -ekwu na nke mbụ, maka onye ọchụnta ego nke nwere echiche, echiche na nghọta, rapara na ya ma nwee mmata akara siri ike na iwu ụlọ. N'ihu ego na -ezughị ezu, enweghị onyinye, na ngwaahịa otu, anyị dị mma n'iji ohere ahụ, hụ uru na ọghọm nke ụlọ ọrụ ahụ, na izere adịghị ike.
Ndị ọkachamara na -ebubata ihe owuwu ụlọ plastik kwuru na ọgbọ na -esote talent bụ isi ihe na -akwalite mmepe ụlọ ọrụ ahụ. N'okpuru ndabere nke homogenization nke ahịa ala ụlọ, ọdịiche dị n'etiti ngwaahịa na -ekpebi uru nke ngwaahịa na asọmpi ahịa. Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ ime ụlọ chọrọ mmepe akara ogologo oge, ha ga-elebara anya na ọzụzụ na iwebata talent.
N'ikpeazụ, ọwa ahịa na ụdị ahịa bụ ihe dị mkpa maka njikwa ụlọ ọrụ na -etolite ngwa ngwa yana ahụike mgbe gburugburu ala siri ike yana akụ na ụba ahịa dara mba. Dị iche na mmepe nke atụmatụ China, ma nwekwuo mbọ na nkwalite akara, nyocha teknụzụ ngwaahịa na ike mmepe, yana ụzọ ire ngwaahịa ngwaahịa.
Post oge: 05-06-21
ADDRES No.6 XinYuan Road JiangYin City, JiangSu Province, China
Ekwentị 0086 15251582621
Ozi ịntanetị miko@iversonfloor.com